माओवादी दलहरुको पुनर्गठनको चर्चाले उब्जाएका प्रश्न – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
माओवादी दलहरुको पुनर्गठनको चर्चाले उब्जाएका प्रश्न
एमाओवादीले नेतृत्व गर्दै सडक संघर्षका विभिन्न कार्यक्रमहरु घोषणा गर्न थालेसँगै समय–समयमा टुक्रिएका पाँच माओवादी पार्टीहरुका बीचमा एकताको प्रसंग पनि उठेको छ । विशेषतः माओवादीको मूलधारबाट वैद्य नेतृत्वको नेकपा—माओवादी, चन्द नेतृत्वको माओवादी, मणि थापा र मातृका माओवादी गरेर विभिन्न दलमा टुक्रिएका छन् । कुनैबेला एकअर्काेमा आरोप र प्रत्यारोप गरेर पानी बाराबारको अवस्थामा रहेका यी दलहरुभित्र अहिले एकताको चर्चा चलेको छ । मुख्यतया संविधानसभाबाटै संविधान लेख्न लागेको एमाओवादी वार्ता वा सहमति छाडेर सडकमा आएसँगै पार्टी एकता वा पुनर्गठनको विषयले विशेष चर्चा पाएको हो । शक्तिशाली बनेर सत्तामा पुगेपछि टुक्रिने र सडकमा रहँदा शक्तिशाली रहने नेपालका कम्युनिस्टहरुको पुरानै प्रवृत्ति हो । यसअघि एमालेमा पनि त्यस्तै प्रवृत्ति देखिएको थियो । सत्तामा जाने होडले गर्दा फुटेको मालेका वामदेव गौतम २०५६ को निर्वाचनमा एक सिट पनि नजितेपछि हतारहतार एमालेमा प्रवेश गरेका थिए ।
दोस्रो संविधानसभामा तेस्रो दलमा सीमित भएको प्रचण्ड एमाओवादी अहिले न सदन न सडक भएर अलपत्रको अवस्थामा छ । सदनमा जाने हो भने अल्पमतमा छ, आफ्नो एजेन्डा कुनै हालतमा पूरा हुन नसक्ने अवस्था छ भने सदन छाडेर सडकमा जाँदा जनताको साथ र समर्थन नपाउने डर पनि त्यत्तिकै छ । जनताको भोट जितेर सदनमा जाने अनि फेरि सदनको प्रक्रिया मान्दिनँ भन्नु त्यति सुहाउने विषय होइन । १० वर्षे विद्रोहदेखि विद्रोह र आन्दोलनमा होमिएका नेपाली युवाहरु विद्रोहबाट थाकिसकेका छन् । कतिपय विद्रोहमा होमिएका माओवादी पूर्वलडाकुहरु आज खाडीको मरूभूमिमा उँट धपाउँदै छन् । के उनीहरुले बन्दुक बोकेर देखेको सपना त्यही नै हो त ? सबैको सामु गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । यस्ता अनुत्तरित प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने सबैभन्दा जिम्मेवार व्यक्ति नै प्रचण्ड नै हुन् । सडकमा वा विद्रोहमा जाँदा वैद्य र चन्द नेतृत्वको दलसँग नजिक देखिने एमाओवादी अहिले स्पष्ट कार्यदिशाको अभावमा छटपटाएको छ ।
जे उद्देश्यले विश्वमा कम्युनिस्ट पार्टीहरु स्थापित भएका थिए, नेपालमा पनि जे–जसरी पार्टीहरु जन्मिए उनीहरुलाई समयअनुसार रुपान्तरण गर्ने काम भएन । कहिले चिनियाँ कम्युनिस्ट त कहिले रसियन कम्युनिस्टको नाममा विभाजित भइरहे । सडकमा, विद्रोहमा निकै क्रान्तिकारी र राष्ट्रवादी देखिने नेपालका कम्युनिस्टहरु सत्तामा पुगेपछि भने उनीहरुमा स्खलन सुरू हुन्छ । स्खलनलाई नै मुख्य आधार बनाएर समय–समयमा कम्युनिस्ट पार्टीहरु टुक्रिने गरेका छन् । अहिले नेपालका माओवादी विचारधारा बोक्ने कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरुमा जीवन, व्यवहार र कार्यशैलीमा व्यापक रुपमा स्खलन आएको देखिन्छ । एमाओवादीबाट वैद्य पक्ष अलग हुँदा पनि त्यही विषयलाई उनीहरुले उठाएका थिए । वैद्य पक्ष जे सोचेर संविधानसभा छाडेर सडकमा आयो, तर उनीहरुको पक्षमा व्यापक समर्थन देखिएन । उनीहरुले गरेका कार्यक्रमहरु खासै प्रभावकारी बन्न सकेनन् । उल्टै वैद्य समूहबाट प्रभावशाली नेता नेत्रविक्रम चन्दलगायतका नेताहरु अलग भएपछि वैद्य पक्ष झनै खुम्चिन पुग्यो । चन्द पक्ष अहिले फेरि युद्धको नीति लिएर अगाडि बढिरहेको छ । माओवादी विद्रोहकालकै झझल्को दिने गरेर भर्खर नारायणगढ, कमलनगरमा रहेको निजी जग्गा आमसभा गरेर कब्जा पनि गरेको छ । मणि थापा र मातृका यादवको पनि बल प्रयोगकै नीति रहेको छ । यदि एकता गरेर फेरि पनि मूलधारमा फर्किन सकेनन् भने उनीहरुको अस्तित्व नै समाप्त हुने अवस्था देखिन्छ ।
किन यसरी शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी एकाएक विभिन्न साना टुक्रामा विभाजित हुन पुगे ? भन्ने विषयको गम्भीर आत्मसमीक्षा नगरीकन अब ती पार्टीहरुमा एकीकरण हुन असम्भव देखिन्छ । कुनै न कुनै नेताको व्यक्तिगत दम्भ, घमण्ड र कमजोरी नभइकन पार्टी विभाजित बन्न सक्दैन । आत्मसमीक्षा गरेर नेताहरुको कार्यशैली र गलत प्रवृत्ति नसच्चिएसम्म शीर्ष नेताबीच टाउको मिलाउँदैमा समग्र संगठन भावनात्मक रुपमा एकताबद्ध बन्न सक्दैन । स्वयं एमाओवादीले पनि दोस्रो संविधानसभामा पराजित हुनुका कारणहरुलाई गम्भीर ढंगबाट आत्मसमीक्षा गर्न सकेको छैन । उसले उल्टै तत्कालीन सरकार वा अन्य दललाई निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै दोष थोपर्ने काम ग¥यो । आफ्नो आङको जुम्रा नदेख्ने र अरुको आङको भैँसी देख्ने प्रवृत्तिले पनि माओवादी विचारधारा बोक्ने पार्टीहरुमा समस्या देखिएको छ । केही विश्लेषकहरु माओवादी मूलधारमा राजनीतिक विघटन र सांस्कृतिक विघटनको दिशामा उन्मुख भएको विचार व्यक्त गर्दछन् । नेपाली समाज, समय र अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भलाई बुझेर माओवादी शक्तिहरुले पार्टी संगठन, सिद्धान्त र कार्यदिशा तय नगरेसम्म गुमेको माओवादी शक्ति र प्रतिष्ठा फर्काउन निकै कठिन छ । २०५२ सालको नेपाली जनताको अवस्था, साक्षरतालगायतका अन्य नेपाली सन्दर्भ र अहिलेको नेपाली सन्दर्भमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । फेरि त्यही ढंगले क्रान्ति र विद्रोहको कुरा गर्नेहरुको पनि नेपाली समाजमा खासै तुक देखिँदैन । प्रतिफल केही नपाइकन गरिने क्रान्ति, आन्दोलन वा सडक संघर्षको अहिले खासै औचित्य देखिँदैन । युवाहरुमा देखिएको राजनीतिप्रतिको वितृष्णाले पनि बन्द, हड्ताल, विद्रोह, कब्जा र धम्कीको राजनीति सधैँका लागि त्याग्नुपर्ने जरूरी छ । एकताको जतिसुकै चर्चा गरिए पनि एकताको मिलनबिन्दु पत्ता लाग्न सकेको छैन ।
दुईपटक सरकारको नेतृत्व गरे पनि प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीले आर्थिक र सामाजिक मुद्दालाई प्रभावकारी ढंगले उठाउन सकेन । यसअघि पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरुको एकताको कुरा पटकपटक उठे पनि त्यसले सार्थक स्वरुप ग्रहण गर्न सकेको छैन । आजभन्दा छ वर्षअघि एमाले र एमाओवादीका बीचमा एउटै कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउने हल्ला खुब चलेको थियो । हरेक पार्टीका नेतामा रहेको दम्भ र अहंकारले गर्दा पनि कम्युनिस्ट पार्टीबीचको एकता मृगतृष्णाजस्तो बनेको छ । नेताको बोलीचाली र कार्यशैली सैद्धान्तिक रुपमै हेर्दा पनि असफल प्रमाणित भएको छ । सिद्धान्तका आधारमा अलग हुनुपर्ने खासै कारण छैन । पार्टीहरुका बीचमा वैचारिक मेलमात्र भएर हुँदैन, एकले अर्काे पार्टीको अस्तित्व पनि स्वीकार गर्नुपर्दछ । नेपालमा रहेको राजनीतिप्रतिको बुझाइ र नेताहरुको कार्यशैलीमा व्यापक रुपान्तरण नभएसम्म पार्टी एकता सम्भव देखिँदैन । साँचो अर्थमा एकीकृत हुनका लागि खुला मन र फराकिलो छाती चाहिन्छ । संकुचित मन र संकीर्ण विचार लिइरहेसम्म माओवादी पार्टीहरुबीचको एकता सम्भव देखिँदैन ।
प्रजातान्त्रिक संस्कारमा कुनै एक शक्तिशाली राजनीतिक दलमा आउने तरंग र उथलपुथलका कारण सम्पूर्ण राजनीतिक संस्कार र प्रणाली नै अस्थिर बन्न पुग्छ । नेपालको राजनीतिमा हिजोको विद्रोही माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको १० वर्षसम्म पनि नेपाली राजनीतिले गति लिन नसक्नुको कारण एमाओवादी, एमाले र कांग्रेसमा देखिएको विचलन नै हो । खासगरी, एमाओवादीमा आएको विचलन र क्षयीकरणकै कारणले समयमा संविधान बन्न सकेको छैन । अझै, नेपालले सडक संघर्ष र हड्तालबाट उन्मुक्ति पाउन सकेको देखिँदैन । राजनीतिक दलहरुलाई कम्युनिस्ट र गैरकम्युनिस्ट मुख्य दुई दलमा परिवर्तित नगरेसम्म राजनीतिमा अस्थिरता र दण्डहीनता बढिरहने देखिन्छ । अहिलेको समयमा माओवादी मात्र रुपान्तरित र स्थिर बन्ने हो भने पनि नेपालको राजनीतिले फड्को मार्ने सम्भावना छ । संसदीय परिपाटी पनि मान्छु र विद्रोह पनि गर्छु भनेर दुईजिब्रे प्रचलन रहेसम्म नेपाली राजनीतिले अपेक्षित गति लिन सक्दैन । यदि लोकतान्त्रिक संस्कार र पद्धतिमा चल्ने हो भने विद्रोह, हड्तालका कुरा छाडेर संसद्भित्र बहुमत र अल्पमतको राजनीति नगरी सुखै छैन । अन्य वैद्य, चन्द, मणि थापा र मातृका माओवादीले संसदीय प्रजातान्त्रिक बाटो अवलम्बन गर्नुको विकल्प छैन । जीवनभर क्रान्ति, परिवर्तन र रुपान्तरणको नारा जपेर कहिल्यै परिवर्तन देख्न नपाई मर्नुको खासै तुक देखिँदैन । कतिपय बिग्रिएका, मिति गुज्रिएका औषधिजस्तो बनेका नेताहरुलाई एक ठाउँमा राखेर मात्र पार्टी एकीकरण गरेर त्यसले खासै दूरगामी प्रभाव पार्न सक्दैन । हिजोका गल्ती र कमजोरीहरुलाई आत्मसमीक्षा गर्दै अब कहिल्यै गल्ती नगर्ने भनी जनतासामु प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि मात्र माओवादी पार्टीहरुका बीचमा एकता हुन सम्भव देखिन्छ ।